Kedu mgbe ị nwere ike ịgbaziri agbaziri ma were onyogho na ntanetị? | Martech Zone
Saturday, March 10, 2018 Sunday, Eprel 1, 2018 Douglas Karr
Azụmaahịa m na-arụ ọrụ na nso nso a wepụtara mmelite na Twitter na ihe osise na-atọ ọchị nke nwere akara ngosi ha na ya. O juru m anya n’ihi na echeghị m na ha ga-ego onye na-ese foto. Yabụ, ezitere m ha ederede ha juru ha anya… ha goro ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta ka ha tinye aka wee too na-eso ha ma ha zigara ya.
Mgbe ha na ụlọ ọrụ ahụ kwurịtara okwu, ọ tụrụ ha karịa mgbe ha chọpụtara na ihe oyiyi ọ bụla, meme ọ bụla, na katuunu ọ bụla nke ekesara na-eme ya na-enweghị ikike ụlọ ọrụ. Ha chụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'ọrụ wee laghachi ma wepu onyonyo ọ bụla ejiri na ntanetị.
Nke a abụghị ihe ọhụrụ. M na-ahụ nke a ugboro ugboro. Otu n'ime ndị ahịa m na-eyi egwu na ikpe mgbe ha jiri ihe oyiyi nke igwe nyocha kwuru na nweere onwe ya iji n'ezie abụghị. Ha ga-akwụ ọtụtụ puku dollar iji mee ka nsogbu ahụ la.
Ndị ọchụnta ego kacha nwee nsogbu banyere ịmezigharị onyogho zuru ezu maka mgbasa ozi, yana 49% nke ndị na-ede blọgụ na ndị na-elekọta mmadụ na-ezuru ihe oyiyi, yana 28% nke azụmaahịa.
Nke a bụ mmejọ na nso nso a site na ụlọ ọrụ jiri foto m Podcast studio, ma machie akara ngosi ha na ya:
Nyere ulo oru mbo m mere na ma studio yana foto, ọ bụ ihe nzuzu na mmadụ ga-dị nnọọ jidere ya na-atụfu ha onwe ha logo na ya. Ezigala m ndị otu niile akwụkwọ ozi a.
Maka udo nke uche, anyị na-eji saịtị anyị na ndị ahịa anyị eme otu n'ime ihe ndị a:
I goro ndị na-ese foto ma hụ na azụmaahịa m nwere ikike zuru oke iji ma kesaa foto m goro ha were were na enweghị oke. Nke ahụ pụtara na m nwere ike iji ha maka saịtị m, ọtụtụ saịtị ndị ahịa, bipụta akwụkwọ, ma ọ bụ ọbụlagodi inye onye ahịa ya ka o jiri mee ihe masịrị ha. Inye onye na-ese foto abụghị naanị uru maka ikikere, ọ nwekwara mmetụta dị ịtụnanya na saịtị. Enweghị ihe ọ bụla dịka saịtị mpaghara nwere akara ngosi mpaghara ma ọ bụ ndị ọrụ ha na foto ha n'ịntanetị. Ọ na-ahazi saịtị ndị ahụ ma gbakwunye ọkwa dị ukwuu.
I nyochaa ikikere maka ihe oyiyi ọ bụla anyị na-eji ma ọ bụ na-ekesa. Ọbụna na saịtị anyị, ana m akwado na ụzọ akwụkwọ dị maka onyonyo ọ bụla. Nke ahụ apụtaghị na anyị na-akwụ ụgwọ maka ihe oyiyi ọ bụla, agbanyeghị. Otu ihe atụ bụ infographic dị n'okpuru - ejiri ya mee ihe ikike dịka akọwapụtara na izipu izizi site Gwa.
Berify bụ nchọta onyonyo iji nyere gị aka ịchọta foto na vidiyo ezuru. Ha nwere ihe onyonyo dabara na algorithm ma nwee ike ichota ihe oyiyi 800 nde tinyere onyonyo onyonyo site na isi igwe ihe nchoputa oyuyo.
N'ihe banyere foto na ihe oyiyi ezuru ohi, ndị ọrụ ịntanetị - ndị na-eme ka izu ohi ahụ dị - na-ahọrọ iche na ọ bụ mpụ na-enweghị mmetọ nke ha achọghị mgbaghara. Agbanyeghị, ndị ọkachamara na-ese foto na ndị ọrụ ntụrụndụ maara eziokwu ahụ - na-abụghị enweghị ụkpụrụ, izu ohi ihe oyiyi bụ ihe megidere iwu ma dị oke ọnụ. Gwa
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, A Nseta nke Online Image Izu. Ọ na-akọwa nsogbu ahụ, otu ikike na ojiji ziri ezi si arụ ọrụ (nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emegbu), yana ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịchọta ohi gị.
Tags: dozienwebisiinkaohi oyiyiojiji ihe oyiyiiji ihe oyiyiinfographicizu ohi ihe oyiyizuru ọdịnaya